Mubvunzo: Nzira Yokunyungudutsa Hove Yakaoma Mumvura - BikeHike
musha » zvakasiyanasiyana » Mubvunzo: Nzira Yokunyungudutsa Hove Dzakaoma Mumvura
Ndeipi nzira yakanakisa yekunyungudutsa hove dzakaomeswa mumvura?
Unokurumidza kunyungudusa hove dzakaoma muchando sei?
Unodzora sei hove?
Hove dzakanaka kwenguva yakareba sei kana dzakaomeswa mumvura?
Unogona kunyungudutsa hove mumvura inotonhora here?
Sei ndichifanira kubvisa hove mupasuru ndisati ndanyunguduka?
Zvakaipa here kunyungudutsa hove mumvura inopisa?
Ndeipi nzira yakachengeteka yekunyungura hove dzakagwamba?
Ihove dzakaomeswa nechando dzinofanira kunyungudutswa usati wabika here?
Zvakanaka here kubika hove kubva muchando?
Sei hove dzakaomeswa mushy?
Zvinotora nguva yakadii kuti hove dzinyungudike patembiricha yemumba?
Unogona here kudya hove yakaomeswa yechando yemakore maviri?
Sei usingafaniri kunyungudutsa hove mupurasitiki?
Hove dzakaomeswa dzingagara kunze kwenguva yakareba sei?
Sei mvura inotonhora ichioma kupfuura kupisa?
Hove inotora nguva yakareba sei kunyungudika mufiriji?
Unogona here kudzora hove pakaunda?
Inokurumidza uye inozivikanwa nzira yekudzikisa hove iri mumvura inotonhora. Hove dzinofanirwa kunge dziri mubhegi rakavharwa kuitira kuchengetedza uye kuchengetedza kunaka, uye kunyudzwa mumvura kusvika yapera. Siya kusvikira yapera defrost. Defrost nguva inowanzoita maawa matanhatu kusvika masere palb.
Key Takeaways Tanga nehove dzakaoma nechando. Usafanonyunguduka mufiriji. Usabvise vacuum-packaging usati wanyunguduka. Kunyungudusa hove "isina kusimira" pasi pemvura kunoita kuti inyura. Shandisa mvura yemupombi inotonhora chete kunyunguduka sezvo izvi zvichideredza njodzi yekukura kwebhakitiriya. Shandisa hove dzakanyungudutswa nekukurumidza kuti uve nemhedzisiro yakanaka!
Kuti rikurumidze kunyungudutsa hove, tanga waisa hove mubhegi repurasitiki rinovharika uye wosundira mhepo yese kubva mariri usati wavhara. Kana iwe wakachengeta zvikamu zvako zvehove mubhegi rakavharwa-vacuum saka unogona kuisiya mukurongedzerwa kwayo. Kamwe defrosted nguva dzose kubika hove pakarepo. Nakidzwa nekudya kwako kweFishbox !!Jul 29, 2016.
Defrosting Hove mufiriji Nzira yakachengetedzeka yekudzikisa hove chando ndeyekuita mufiriji kwehusiku hwose. 1 Ingoibvisa kubva mufiriji uchiisa mufiriji usati warara uye inenge yagadzirira kubika mangwana. Kana hove dzako dzakavharwa, haufanirwe kunetseka nezvekudonha kwayo.
Paunoomesa hove nemvura, hove dzakaonda dzinogara kwemwedzi inosvika 6 nepo hove dzine mafuta dzichiramba dziripo kusvika kumwedzi mina. Kunyangwe iwe ukashandisa mvura kana ice glazing haiwedzere nguva yechando asi inogona kukanganisa kuoma uye kunhuhwirira kwehove dzako kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge zvichinyura, zvinogona kukanganisa kuoma uye kunhuhwirira kwehove dzako kana iwe uchinge wadzima kushandisa.
Inokurumidza uye inozivikanwa nzira yekudzikisa hove mumvura inotonhora. Hove dzinofanirwa kunge dziri mubhegi rakavharwa kuitira kuchengetedza uye kuchengetedza kunaka, uye kunyudzwa mumvura kusvika yapera. Siya kusvikira yapera defrost.
Kuti uuraye mabhakitiriya anogadzira botulism, zvakanyanya kukosha kuti ubvise vacuum packaging usati wanyungudutsa hove dzako. Kana C. botulinum iyoyo yakashata yasangana neokisijeni, inenge isisakwanise kugadzira chepfu inouraya.
Mvura inotonhora-inotonhora haigoni kudzikisa hove nokukurumidza zvakakwana asi mvura inodziya kana inopisa inosvibisa nekugadzirwa kwehove (iwe une shoko iroro pamusoro pekudzivirira kuchinja kwakanyanya kwekushisa, handizvo?). Asi shandura iyo kunze kwemaminetsi makumi maviri kana makumi matatu kusvika hove dzanyatsonyunguduka, kungoita chokwadi chekuti mvura inoramba ichitonhorera.
Nzira yakanakisa yekunyungudutsa chikafu chegungwa zvishoma nezvishoma, nekuiisa mufiriji kwehusiku. Dzivisa kusvibiswa kwemuchinjika nekuisa chikafu chemugungwa chinonyungudutswa kure nechero zvinhu zvitsva zvinogadzirwa. Kana uchida kunyungudusa chimedu chehove nekukurumidza, chiise mubhegi rezip-top wonyudza mumvura inotonhora.
Kunyange zvazvo kune dzimwe mhando dzehove dzinobika zvakanaka pasina kunyange kunyungudutswa (hove dzakaonda, se tilapia necod, dzinogona kubva kubva mufiriji kuenda kunopisa kana kupisa pani), zvinowanzova zvakanakisisa kunyungudutsa hove isati yabika. Chokwadi, unogona kunyungudutsa hove zvishoma nezvishoma mufiriji.
Kubika hove dzakaomeswa nechando? Iwe unogona kusvetuka nzira yekunyunguduka zvachose uye kubika hove dzakaomeswa zvakananga kubva mufiriji. Iwe unozofanira kuwedzera maminetsi mashoma panguva yekubika muresipi yako kuti uzvidavirire nekuda kwekushaikwa kwekunyorova, asi unogona kupinza, chipfunga, kubika, kugocha kana grill hove kubva mufiriji! Chivabvu 2, 2019.
Cheat Sheet inotsanangura kuti masero ari muhove ane mvura, uye kana mvura iyi ikaomesa inogadzira makristasi echando. Kana aya makristasi echando anyungudutswa, mvura inodurura muhove, zvichikonzera mushy mess (kuburikidza neThe Spruce Eats). Kana iwe uchida kufambisa hove dzako, ita shuwa kuti unongozviita kwemaminetsi makumi matatu.
Hove hadzifanirwe kunyungudutswa patembiricha yemumba nekuti tembiricha inodziya inobvumira mabhakitiriya kukura. Shandisa imwe yenzira dzinotsanangurwa pasi apa. Nguva yeThawing: 6 kusvika 24 maawa, zvichienderana nehuwandu. Kazhinji, maawa matanhatu kusvika ku6 paundi.
Chero hove dzakaomeswa nechando kana magoko zvichave zvakachengeteka nekusingaperi; zvisinei, kunaka uye kugadzirwa kuchadzikira mushure mekuchengetedza kwenguva refu. Pamhando yepamusoro, omesa (0 °F / -17.8 °C kana pasi) hove dzakabikwa kusvika kumwedzi mitatu.
Muchetura unokonzera chirwere chinotyisidzira upenyu chinonzi botulism. Nekuvhura kurongedza pakunyungudusa hove yakavharirwa, okisijeni iripo uye spores haiburitse masero ezvinomera anoburitsa muchetura. Listeria monocytogenes utachiona hunogona kusvibisa chikafu.
Usambofa wakasiya zvekudya zvegungwa kana chimwe chikafu chinoora kubva mufiriji kweanopfuura maawa maviri kana kweinopfuura 2 awa kana tembiricha iri pamusoro pe1 ° F. Hutachiona hunogona kukonzera kurwara hunokura nekukurumidza patembiricha inodziya (pakati pe90 ° F ne40 ° F).
Mvura inopisa inofanira kugara ichibvisa zvinhu nekukurumidza kupfuura mvura inotonhora. Imhaka yekuti mwero wekupisa kuyerera pakati pezvinhu zviviri unogara uchiwedzera sezvo tembiricha musiyano pakati pazvo unowedzera.
Nzira yekudzikisa hove nehove. Nzira yakanakisa yekudzikisa hove yegungwa yakaomeswa zvakachengeteka zvishoma nezvishoma mufiriji. Izvi zvinoreva kubvisa hove dzako kubva mufiriji wodziisa mufiriji kwehusiku humwe, kana kutenderera kwemaawa 12-18 zvichienderana nekukura kwehove kana mafiritsi.
Nzira yakachengeteka yekudzikisa hove ndeyekuisa mufiriji. Usaite: Rega hove dzako dzinyunguduke pakaunda Kuenda kubva mufiriji kuenda kune tembiricha yekamuri hakungoshandure magadzirirwo ehove dzako, asi zvinogona kutungamira mukukura kwebhakitiriya pahove dzako.
Mubvunzo: Inguva Yakadii Kubvisa Hove Dzakaoma Mumvura
Mhinduro Yekukurumidza: Inguva Yakadii Kunyungudutsa Hove Yakaomeswa Mumvura Inotonhora
Mubvunzo: Ndinogona Kunyungudutsa Hove Dzakaomeswa MuMicrowave
Ndinogona Kubvisa Hove Yakaomeswa MuMicrowave
Mubvunzo: Ndinogona Kubvisa Hove Dzakaoma Nechando
Mubvunzo: Ikareba Sei Hove Dzakaomeswa Nechando
Mhinduro Yekukurumidza: Ndinogona Kunyungudutsa Hove Yakaomeswa Kunze
Mubvunzo: Inguva Yakadii Kunyungudutsa Hove Dzakaoma Nechando
Mhinduro Yekukurumidza: Ndinogona Kunyudza Fillets Dzehove Dzakaomeswa Kubva Muchitoro Chegirosari
Mhinduro Yekukurumidza: Unogona Kwenguva Yakadii Kunyungudutsa Hove Yakaomeswa
Mubvunzo: Unotora Hove Dzakaoma Kwenguva Yakadii?
Mubvunzo: Inguva Yakadii Kuti Hove Dzakaoma Nechando Dzinyunguduke